पाकिस्तानमा हिन्दुहरुमाथि मुसलमानहरुको ज्यादती रोकिएन -
२४ कार्तिक २०७७, सोमबार १६:०६ हिमवत्खण्डLeaveaComment on पाकिस्तानमा हिन्दुहरुमाथि मुसलमानहरुको ज्यादती रोकिएन
पाकिस्तानमा अल्पसंख्यकहरूमाथि अत्याचार रोकिंदैन। फेरी, चिन्ता जगाउने समाचार छिमेकी देशबाट आउन शुरु भयो। ११ विपक्षी दलहरूले संयुक्त मोर्चा ‘पाकिस्तान लोकतान्त्रिक आन्दोलन’ को अचानक सक्रियताले अल्पसंख्यकहरूको उत्पीडनको खबरलाई सुस्त तुल्यायो तर अब यो फेरि गतिमा आयो।
ताजा मुद्दा पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तको संगार क्षेत्रबाट आएको हो। हिन्दू युवा ओशिश माली रहस्यमय परिस्थितिमा यहाँबाट हराए। अब उनको शव पाकिस्तानको पंजाब प्रान्तबाट बरामद गरिएको छ। पाकिस्तानका अल्पसंख्यक घटनासँग सम्बन्धित घटनाहरूको अनुगमन गर्ने सामाजिक कार्यकर्ता राहाट अस्टिनले ट्वीट गरेर स्तब्ध पार्ने जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार, खैबर पख्तूनख्वाको अहमदिया समुदायका 75 75 वर्षीय महबूब अहमदलाई इस्लामिक जिहादीहरूले मारे। धार्मिक विश्वासका कारण कट्टरपन्थीहरू लामो समयदेखि वृद्धको पछाडि थिए। मौका पाए पछि उनीलाई जिहादीहरूले मारे। यो आरोप लगाइएको छ कि हत्याराहरूको गिरोह पेशावरका शेख मुहम्मदको नेतृत्वमा थियो। राहत अस्टिन भन्छिन् कि पाकिस्तानमा जिहादीहरू अहमदिया मात्र होइन, यहूदी, इसाई, हिन्दु र शिया भन्दा पछाडि छन्। यस क्रममा १२ वर्षीया क्रिश्चियन केटी फराह शाहीनलाई पंजाबको अहमदबादको गुलिस्तान कालोनीबाट अपहरण गरिएको थियो। यसभन्दा पहिले उहाँ धेरै दिनसम्म शारीरिक शोषण गर्नुभयो। त्यसपछि 45 45 वर्ष पुरानो मुस्लिम मध्यम उमेरको खिजार हयातको मोटरी रकम चार्ज गरेपछि शरिया कानून अन्तर्गत विवाह गरियो।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने १aबर्षे हिन्दू नाबालिगले यस घटनाको केहि दिन अघि नै त्यस्तो कुराको सामना गर्नु परेको थियो। उनको आमाको अनुरोध, “कृपया मलाई मद्दत गर्नुहोस्। हामी असहाय छौं। कमजोर छन्। हामी केहि गर्न सक्दैनौं। कृपया मेरी छोरी फिर्ता गर्नुहोस्। उनी १ 13 बर्षको मात्र छ। कृपया हामीमाथि दया गर्नुहोस् “- अझै पनी सामाजिक मिडियामा गुंजो छ।
वास्तवमा, १ 13 वर्षीया सोनिया कुमारीलाई धर्म परिवर्तनका कारण केही धार्मिक गुंडहरूले बलात्कार र अपहरण गरीरहेका थिए। उनकी आमाले छोरीलाई अपहरणकारीको पकडबाट मुक्त गर्न यथाशक्य गरिन। तर निराशा चारै तिरबाट आयो। यस्तो अवस्थामा उसले सोशल मिडियामा बिन्ती गर्नुपर्‍यो। यद्यपि कुनै प्रभाव अहिले सम्म देखिएको छैन। हद यो छ कि त्यस्ता घटनाहरूले पाकिस्तानको मुख्यधारको मिडियामा कुनै ध्यान दिँदैन। यो नोट हुन सक्छ कि केही समय अघि २२ वर्षीया हिन्दु केटी गीताको पनि हत्या गरियो। उनको शव सिन्धको डिप्लोको कैनेरो गाउँबाट फेला परेको थियो। त्यस्तै मिरपुरखासमा एक हिन्दू केटी काजललाई सशस्त्र व्यक्तिहरूले अपहरण गरेका थिए जसको बारेमा आजसम्म पत्ता लगाउन सकिएन।
यो समाचार पाञ्चजन्य अन्नलाइ बाट साभार गरिएको हो!
नयाँ पुस्ताका नेताहरुको बाहुल्यता रहनेगरी सचिवालय पुर्नगठन गरौं : पूर्व मन्त्री बास्कोटा
पुर्व मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण मुक्त
यो समयमा बच्चालाई खोकी लाग्यो? नआत्तिनुहोस्,जथाभावी औषधि होईन यस्ता उपायहरु प्रभावकारी हुन्छन्
२५ बैशाख २०७७, बिहीबार १३:०४ हिमवत्खण्ड सम्बाददाता
६ सय रोग निको पार्ने बहुगुणी बेसारबारे जान्नैपर्ने तथ्यहरु
६ असार २०७७, शनिबार १९:२४ हिमवत्खण्ड सम्बाददाता
उपत्यका केन्द्रित स्मार्ट सिटीको सट्टा प्रदेश स्तरमा स्मार्ट शहरहरु निर्माण गरिनुपर्छ
५ असार २०७७, शुक्रबार १९:०२ हिमवत्खण्ड सम्बाददाता